Anund လယ်ယာနှင့်ဗိုက်ကင်းခြေရာခံရွရွပြေး | Holmbygden.se
Anund Farm ရွရွပြေးလမ်းကြောင်း
တစ်လန်းဆန်းနှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်တစ်ကောင်းတဲ့နွေရာသီလမ်းလျှောက်ယူချင်သောသူတို့အဘို့နှစ်ခုလမ်းကြောင်းပွင့်လင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးများမှာ. ကိုယ့် 2,5km မှာAnundgårdတစ်ဦးကတိုတောင်းအနည်းငယ် undulating နှင့် illuminated ပုဒ်. ထို့အပြင်နောက်ထပ်အခြားလမ်းကြောင်း 8km မှာရှိ (t.o.r.) AnundgårdထံမှÖsterströmမှ, သောတိုတောင်း connect. ကောင်းသောကားပါကင်အဆောက်အဦးနှင့်အတူစ / အ finish ကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဆိုဒ်များ Holmes Vallen များမှာ, Anund Manor ကျောင်းနှင့် Österströms Estate. ဆီးနှင်းဖုံးခွင့်ပြုသည့်အခါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, ပုဒ်ကောင်းသောအခြေအနေအဆက်မပြတ်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း. ညာဘက်သင်အမြဲလက်ရှိလမ်းကြောင်း status ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. လျှပ်စစ်အလင်းရောင်အလိုအလြောကျနှင့်နာရီတိုငျအောငျအပျေါအဲ့ဒီအချိန်မှာ 22:00.
မက်စ် Wikholm 070-669 44 52
အဆိုပါ groove ထံမှ:
(ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားများအတွက် – ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ)
မြေပုံများ, စတာတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ. skidspår.seမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
Skidspår.se / Vasternorrland / Sundsvall / စတော့ဟုမ်းတာတမံ
တောင်မှဗိုက်ကင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 2,5 ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်stafettävlingarလူသိများလမ်းကြောင်း၏ကီလိုမီတာ. အဆိုပါလမ်းကြောင်း illuminated နှင့်ဗိုက်ကင်းကျောင်းတွင်စတင်နှင့် finish ကိုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျလညျးတိုတောင်းကွင်းဆက်ရှေးခယျြနိုငျ 1 ကီလိုမီတာ. အဆိုပါလမ်းကြောင်းဗိုက်ကင်းမိမိဆန္ဒအလျောက်ဒြပ်ပေါင်းများကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်.
illumination ၏စက်နှိုး အဆိုပါကိတ်မုန့်မှာဆီမီးခွက်အောက်ရှိအမှတ်အသားနှင့်အတူကိုယ်တိုင်ပြု, ပွဲချင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးတွေ့မြင်. မီးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ် 21:30.
မြေပုံများ, စတာတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ. skidspår.seမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: Skidspår.se / Vasternorrland / Sundsvall / ဗိုက်ကင်း
လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ Holmes များအတွက်အသေးစိတ်ဒေသခံမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သင်၌မြင်ရပါလိမ့်မည် ရာသီဥတု.
နောက်ကျောခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း / အပန်းဖြေရန်
Höga halter av björkpollen, samt låga halt... ဆက်ဖတ်ရန်